AQRISO Dhacdo xanuun badan, Mardambe masoo kici doono.
Home Wararka Maanta AQRISO Dhacdo xanuun badan, Mardambe masoo kici doono.
WAA KUMA ABDELHAK NOURI ?
Kani waa Andelhak Nouri (20 jir) u dhashay wadanka Maroko, waa muslim aad u jecel diinta islaamka, wuxuu u ciyaaraa kooxda Ajax.
Wuxuu yaraantiisa jeclaa inuu kubadda Cagta hormar badan ka sameeyo lakin alle awoodiis isagoo aad u yar ayaa lagu soo daray kooxda Ajax yaryarkeeda.
Sanadkaan oo uu 20 jir noqday ayaa waxaa si rasmi ah loogu soo dalacsiiyay Kooxda waaweynka Ajax oo ahayd riyadiisa ugu weyn.
• MAXAA KU DHACAY NOURI ? 
Isagoo u ciyaaraya Kulankii ugu horeeyay ee kooxdiisa Ajax sabtigii hore ayuu dhulka ku dhacay, kadib Qolada dhaqaatiirta oo garoonka soo gashay ayaa muddo ka badan 30 daqiiqo xaaladiisa la tacaalayay.
Waxaa qasab noqotay in Ambulanse xitaa lagu qaadi karin oo Helicopter ayaa si dag dag ah loogu geeyay isbitaalka, Xitaa waala joojiyay ciyaartii markaas socotay
• XANUUN BADNAA ?
Abdelhak Nouri marki isbitaalka la geeyay islamarkii koomo ayuu galay, waxeyna dhaqaatiirta sheegeen in markii hore wadnaha uu joogsaday lakin hada Maskaxdiisa ayaa dhaqaaqday. Subxaanallah
Oxygen-ka maskaxdiisa iyo wadnihiisa u dhaxeeyay ayaa istaagay, taas oo keentay in Nouri maskaxdiisa ay ka dhaqaaqday halkii marka hore Alle ugu talo galay.
• Maskaxdiisa Shaqqda Wey Gabtay
In mardambe uu lugihiisa ku socdo, in mardambe uu xitaa fariisan karo, in mardabe uu aduunka mustaqbal ku yeesho wey uga dhamaatay Walaalkeen Muslimka ah Abdelhak Nouri.
Dhaqaatiir culus oo leesugu keenay ayaa waxey saacado ka hor sheegeen in gabi ahaan maskaxdiisa ay gabtay hoosha, wuxuuna Nouri u dhaxeeyaaa nolol iyo Geeri
• Nouri WAX MASOO XASUUSAN DOONAA ?
Maya, Nouri wax dambe oo uu xasuusan doono ma jirto xitaa Waalidkiisa, inuu Ajax u ciyaarayay, inuu gabar saxib la ahaa, asxaabtiisa, Qof uu soo xasuusan doono ma jrto.
Maskaxdiisa ayaa hoolgabtay, xasuus dhan ma jirto.
• HOOYADII IYO AABIHII
Shalay Boqolaal kun oo taageerayaasha Ajax oo u badnaa gaalo ayaa Guriga Abdelhak Nouri tagay, waxey qabsadeen dhamaan wadooyinka guri soo gala, iyagoo wata boorar ay ku qoran yihiin “Stay Stong Nouri” iyo “Allah haku Caafiyo”.
Hooyadiis ayaa iyadoo xijaaban oo aad u ilmeeyneeysa waxey soo istaagtay daaqada guriga, iyadoo gacanta ugu mahad celineeysa dadkii u soo baxay in qoyska Nouri ay sabarsiyaan.
• Hada Muxuu ku Sugan Yahay ?
7 maalin oo xiriir ah ayuu Koomo ku jiraa, Saxarada si aan fiicneen ayaa looga qaadaa, Cuntadana sanka ayaa laga siyaa, Xaaladii ugu darneed ayuu ku jiraa Abdelhak Nouri…
Hadii aad ka naxday Plz u duceey Walaal Abdelhak Nouri in Alle caafimaad siiyo
Allow caafimaad sii aamin yaa rabbi  wlh waa dhacdo xanuun badan
Waxaa Qoray: Idiris Abdulkadir Mohamed (Share)
Magaalada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa sameyn weyn ku...
SAWIRRO: Shirka M/Goboleedyada oo ka furmay Baydhabo
Somaliland oo dabaal dagaysa & Dagaal xoogan oo Hadda ka socdo...